Bilyaneer u dhashay dalka Japan oo dalxiis ku tagaya Dayaxa - BBC News Somali
Bilyaneer u dhashay dalka Japan oo dalxiis ku tagaya Dayaxa
Lahaanshaha sawirka SpaceX
Image caption Dayax gacmeedka BFR ayaa qaadi doona bani aadanka safarka ku tagaya dayaxa
Shirkadda SpaceX ee uu leeyahay ganacsadaha lagu magacaabo Elon Musk ayaa shaaca ka qaadday magaca qofkii ugu horreeyay ee si gaar ah, isagoo rakaab ah ugu soo dul wareega dayaxa.
Ninkaan oo 42 sano jir ah ayaa yiri "Waxaan doortay inaan aado Dayaxa."
Safarka lagu aadayo dayaxa oo hadda qorshihiisu uu yahay sannadka 2023-ka ayaa noqon doonaa kii ugu horreeyay ee ay bani'aadanka ku tagaan dayaxa tan iyo sannadkii 1972-kii, xilligaasoo dayax gacmeedka Apollo 17 ee Mareykanka uu caga dhigtay dayaxa.
NASA oo hawada sare u dirtay dayax gacmeed "qorraxda soo taaban doona"
Mas'uuliyiinta shirkadda ayaa sheegay in tallaabadaas ay ka dhigan tahay "Muhiimad weyn oo sahleysa in fursad la siiyo qof walba oo ku riyooda inuu hawada sare u dalxiis tago".
Image caption Mr Maezawa wuxuu sheegay inuu ku marti qaadi doono ilaa 8 farshaxaniisyte inay dayaxa u socdaalaan
"Markii ay dhulka ku soo laabtaan waxaa laga codsan doonaa iney wax ka sameeyaan. Farshaxaniistayaashaas waxay hammi galin doonaan dhammaan dadka naga midka ah ee riyadaasoo kale leh" ayuu ku yiri saxafiyiinta.